Source Url: https://ekantipur.com/pradesh-2/2020/07/24/159558019578789630.html
वीरगन्ज — नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा भर्ना भइ उपचार गराइरहेकी वीरगन्ज महानगरपालिका– ११ निवासी ८५ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको छ । चिकित्सकका अनुसार ती वृद्ध महिला मुटु रोगी थिइन् । हाल निमोनिया भएर अस्पताल आएकी थिइन् ।
कोरोना अस्पतालका इन्चार्ज डा. निरज सिंहका अनुसार शुक्रबार कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिला वीरगन्जकै एडभान्स मेडिकेयर हस्पिटलबाट बिहीबार रिफर भएर कोरोना अस्पताल आएको थिइन् । ‘ती वृद्ध महिला मंगलबार एडभान्स मेडिकेयर हस्पिटलमा निमोनिया जाँच गराउन आएकी थिइन्,’ डा. सिंहले भने, ‘मुटु रोगकी पुरानो बिरामी महिलामा निमोनियासँगै कोरोनाको लक्षण देखिएपछि कोरोना अस्पताल रिफर गरिएको थियो ।’ ती महिलामा बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
प्रकाशित : श्रावण ९, २०७७ १४:३०